Izingane Ezazalwa Abazali Bengakashadi – The Ulwazi Programme
Izingane Ezazalwa Abazali Bengakashadi
Intombazane ithole izingane noma ingane isekubo yase ishada nobaba wengane sezikhona, ngekhathi eshada bakhohlwa ukuzibika empephweni basho ukuthi sezihamba nonina nje shada, nokuthi bazithele ngenyongo. Bashona abazali balezingane zaqalazaba nenkinga ngoba azikhishiwe komalume. Nomalume laba bangampela banqaba ukubenzela lokho baze bafuna abanye kodwa bababiza isibongo sikamama wabo. Nabo sebeyithola indaba ngoba sebenezinkinga sebetshelwa abathandazi ukuthi nina anibona abesibongo senu, besholesi okuye samama wabo wathi into eyenza lokho nazalelwa ekhaya kubo kamama wenu nangakhishwa khathi umama wenu eseshada, futhi ubaba wenu wayengaqedanga ukulobola umamawenu, kumele niqedelele ubabawenu amalobolo bese nikhishwa ke esibongweni samama wenu kuzolunga izinto zenu.
Ngokomthetho zimbili izingane ezatholwa bengakashadi kodwa kuthiwe zonke sezithelelekile ngisho nabazukulu ngakhoke bonke badingeka ukuthi bayolala kwaMphephethwa, kodwa abazukulu bona ngeke bazifake isiphandla. Njengoba behlatshelwa lapha komalume bazohamba nomlenze uhlaza baye kazikhali baphelezele izingane, mese bebuya bazobuya nomunye abazowuthatha kwaZikhali,nawo bazobuya nawo uhlaza.
Izingane zakhokha leyomali okuthiwa yashoda khathi ubaba wazo elobola, yashiselwa impepho isikhathi esingangesonto, kwahlatshwa nezinkukhu kubikelwa abadala kulomuzi ukuthi kuzoba nomcimbi wonkwenzela ingane ezizalwa intombazane kanozibani, ningathuki uma nizibona. Kwagaywa utshwala kwabekuzohlatshwa nembuzi ukuze lezinga ne ezizofika zifakwe iziphandla, zafika izingane zakaZikhali ngolwesiHlanu zalala lapha kwaMphephethwa kwathi ntambama zashiselwa impepho zabikwa ukuthi sezifikile, zalaliswa izingane zalapha ekhaya kwaMphephethwa. Ngakusasa bavuswa sebebekelwe namanzi okugeza bageza, baphuza itiye namakhekhe, kwaphekwa inyama yembuzi neyenkukhu, zafakwa iziphandla, bathelwa nangenyongo kodwa hhayi abazukulu, banikwa lenyama bayidla. Amantombazane afakwa isiphandla esinxeleni, bathelwa ngenyongo khona futhi, abafana bona bafakwa esikudleni bathelwa nabo ngenyongo. Sebeqedile ukudla, bashiselwa impepho yokuthi sebeyaphuma bayakubo omdala wambozwa ngengubo, umalume wakhe owayeshisisa impepho wambamba ngengalo laba abanye beyibambe ngamachopho noma emaceleni belandela lo landela oshisa impepho, bazungeza igceke ekhuluma ebacelela baze bangena esibayeni, base bephuma ngesango sebephelezelwa beyakubo.
KaZikhali kubokababa wabo
Nakhona babahlangabeza esangweni nempepho, babangenisa endlini bekhuluma empepheni sebekhuluma nedalwa zakubo kababa wabo kodwa bakhulunyelwa omunye lo okuwuye owabamukela kubantu bakomalume wabo ka Mphephethwa. Nakhona kwabe kugayiwe futhi kuzohlatshwa nje befika,l aba abafikanabo bazohamba sebedlile bazolinda kuphekwe kuvuthwe. Nakhona bazomukelwa, mase kuhlinziwe bazofakwa iziphandla ngakulezizandla abafakwe kuzo kaMphephethwa ngoba kuhlanganiswa lamadlozi, bathelwe futhi ngenyongo labathelwe khona komalume. Bese kubuswa kudliwe kusinwe kujatshulwe abakwazikhali nabakwaMphephethwa kuhlukanwe basale abantwana kubo. Seyiphelile lento yokuthi bayisibongo sakamama wabo.